E-4C1 ○ Afaka mihetsika tsara ny fandriana rehefa mifindra ny haingony roa azo ampiharina eo amin'ny ambaratonga mitovy ary afaka mihidy mandeha ho azy rehefa mikosina tanteraka amin'ny strecher misy fitaovana fiarovana. ○ Mpanao kofehy maharitra miantoka amin'ny alàlan'ny fandrindrana. ○ Samy eo amin'ny sehatra sy ny lamosina sisiny roa vita amin'ny HDPE namboarina indray mandeha ho an'ny rehetra. ○ Ny backrest dia fehezin'ny lohataona entona hidiran'ny hydraulic. ○ Ny fanitsiana avo dia ampiasain'ny crank. Cast Dia.150mm castors misy afovoany l ...
E-3C1 ○ Samy manana ny fitaovana vita amin'ny HDPE indray mandeha ny sehatra sy ny lamasinina sisiny. ○ Ny backrest dia fehezin'ny lohataona hydraulic auxilialy. ○ Ny backrest dia fehezin'ny lohataona hydraulic auxilialy. Cast Ф150mm castors manana rafitra fanalahidy afovoany. Cast Ф150mm castors manana rafitra fanalahidy afovoany.
E-8 A1 ○ Ny sehatra lehibe amin'ny rafi-pandrefesana izay mifangaro fiakaran'ny rafi-pandrefesana hidradrahana miakatra avo latsaka sy rava miaraka amina fitaovana naseho X-ray. ○ Ny rafitra fanalahidy afovoany sy ny mpiandry lalana dia mahatonga ny fivoarana ho mihetsika, azo antoka ary maivana kokoa. ○ Ny sezatra dia manana ny asan'ny hi-ambany, Trendelenburg ary manohitra Trendelenburg izay fehezin'ny lakozia amin'ny lafiny roa amin'ny sezo. ○ Ny faran'ilay tohatra dia manana lakilana afovoany, ny fonony ambany ...
E-8 A2-Standard fanamafisana 1.Ny rafitra famerenam-paritra: Nasiana fefy vy efatra tamin'ny lafiny rehetra teo am-pandriana dia mahatonga ny fehezam-bary amin'ny toerana mahomby indrindra sy amin'ny fivoriambe.) Mampiasa ireo mpanondrana entana manafatra entana mitondra kalitao avo lenta. ary lava kokoa ny andro. 2.Mampiasa fitaovam-piasa -Multi-function: Ny fanohanana ny zavamaneno dia afaka mametraka ny monitor ary azo ampiasaina ho lohamilina ihany koa mba hisorohana ny fahatongavan'ireo marary tsy nahy. 3.Push Handle: Mampihena ny enti-miasa sy fisorohana ...
E-8 A3-Konfigurasi standard 1. rafi-pandrefesana foibe: Fenon-tsolika efatra amin'ny lafiny rehetra eo am-pandriana dia mahatonga ny fehezam-bidy amin'ny toerana tsara indrindra sy mahomby. Mampiasa ireo mpanondrana entana ampidirina amin'ny alàlan'ny kalitao avo lenta. lavalava kokoa ny andro. 2.Mampiasa fitaovam-piasa -Multi-function: Ny fanohanana ny zavamaneno dia afaka mametraka ny monitor ary azo ampiasaina ho lohamilina ihany koa mba hisorohana ny fahatongavan'ireo marary tsy nahy. 3.Push Handle: Mampihena ny enti-miasa ary manakana ...